anchovy vinaigrette နှင့်အတူရိုးရှင်းသော bean ကိုသုပ် သာဓက
anchovy vinaigrette နှင့်အတူ Bean ကိုသုပ်
အစ45 မိနစ်6 ကလူ၃၃ ကယ်လိုရီ
ပဲမျိုးစုံကိုအခြေခံပြီး starter တစ်ခုကိုအရသာရှိလှပါတယ် ပဲသုပ်။ အပူဆုံးနေ့များ၌ဤပဲမျိုးစေ့ကိုသယ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
ကျနော်တို့နှစ်ခုထားကြပြီ chives ကြက်သွန်နီနဲ့အစားထိုးနိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့ကိုမပူးပေါင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးစုံလုပ်ပါလိမ့်မယ် pickle လျင်မြန်စွာရေနှင့်ရှလကာရည်အရောအနှော၌သူတို့ကို marinating ။
ခရမ်းချဉ်သီးတွေ၊ သံလွင်သီးတွေ၊ မန္တလေးဆော့စ်.
1 anchovy vinaigrette နှင့်အတူ Bean ကိုသုပ်
ပထမ ဦး ဆုံးသင်တန်းအဖြစ်သို့မဟုတ်အပါအအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်ကိုနွေရာသီအဘို့အကောင်းတစ်သုပ်။
ချဉ်သော chives များအတွက်:
ရေ 75 ဂရမ်
၅၀ ဂရမ် chives
ကြက်သွန်ဖြူ 1 လေးညှင်းပွင့်
ရေနံစိမ်း ၆ ခုမှအန်ကူရီ (ဖျန်ထုတ်လွှတ်)
အပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီ ၇၀ ဂရမ်
ပြီးသားချက်ပြုတ်ထားသောစည်သွတ်ဘူး ၅၀၀ ဂရမ်
သံလွင်သီး ၁၀ လုံးအကြောင်း
chives ကိုပါးလွှာသောအချပ်သို့ဖြတ်ယူပါ။ ရေနှင့်ရှလကာရည်ကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးကြက်သွန်နီထည့်ပါ။ သူတို့ကိုဒီလိုမိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာအောင်ရေနဲ့ရှာလကာရည်ထဲမှာထားခဲ့တာ။
ထို့နောက်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်လေး၊ ကျောက်ချဉ်၊ သံလွင်ဆီ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ငါတို့အစီအစဉ် 30 စက္ကန့်, မြန်နှုန်း 4.
ကျနော်တို့ကပဲယိုစီးပြီးအေးတဲ့ရေအောက်မှာဆေးကြောတယ်။ ငါတို့ကိုပန်းကန်လုံးကြီးထဲထည့်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ chives (အရည်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ) strain နှင့်ပဲ, အပေါ်ညှစ်, ထားတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်သံလွင်အနက်ရောင်ထည့်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ချဉ်သောခရမ်းချဉ်သီးများ (Almagro အမျိုးအစား)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - သီဟသူရ » ယေဘုယျ » anchovy vinaigrette နှင့်အတူ Bean ကိုသုပ်